Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Shirwaynihii Golaha Dhexe Ee Kulmiye Oo La Soo Gabo-Gabeeyey, Rag Xulafo Dhow Ahaana La Iskuna Sadqeeyey
Shirwaynihii Golaha Dhexe Ee Kulmiye Oo La Soo Gabo-Gabeeyey, Rag Xulafo Dhow Ahaana La Iskuna Sadqeeyey
Apr 16, 2012 ENTERTAINMENT Comments Off on Shirwaynihii Golaha Dhexe Ee Kulmiye Oo La Soo Gabo-Gabeeyey, Rag Xulafo Dhow Ahaana La Iskuna Sadqeeyey
Hargeysa – Shirweynihii Saddexaad ee golaha dhexe ee xisbiga Kulmiye oo mudo laba maalmood ka socday Hotelka Maansoor ee Magaalada Hargeysa, ayaa si rasmi ah loo soo gabo-gabeeyey, kaas oo lagu doortay hogaanka cusub ee xisbigaas oo aanu ku jirin Guddoomiyaha ku meelgaadhka ah ee xisbigaas Muuse Biixi oo aan isaga loo codaynin, isla markaana xilkii lagaga xayuubiyey Guddoomiye ku xigeenkii 2-aad ee Kulmiye C/raxmaan C/qaadir.
Shirka golaha dhexe ee xisbul xaakimka Kulmiye ayaa waxa gunaanadkiisa hadheeyey khilaaf xoogan oo ka dhashay Xil ka xayuubinta C/raxmaan C/qaadir, oo in xilka laga xayuubiyo uu Golaha dhexe ee xisbigaas ka codsaday Guddoomiye Muuse Biixi Cabdi, taasina ay keentay in xil ka qaadis xeeladi ku jirto lagu sameeyo Masuulkaas.
Sidoo kale Xilka laga xayuubiyey C/raxmaan C/qaadir ayaa waxa loo doortay Xildhibaan Maxamed Yuusuf Waabeeye oo isku beel yihiin, halka Guddoomiye ku xigeenka 1-aad loogu doortay Afhayeenkii xisbiga Kulmiye Maxamed Kaahin Axmed
Gabo-gabada shirwaynaha golaha dhexe ee Kulmiye ayaa waxa shalay ka soo qaybgalay Madaxwayne ku xigeenka Somaliland C/raxmaan C/laahi Ismaaciil (Saylici), Xubno Wasiiro ah, Xildhibaano iyo Masuuliyiin kale oo dhamaantood ka wada tirsan Golaha dhexe ee kale, madashaas oo sidoo kale lagu buuxiyey xubnaha ka banaan golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee Kulmiye.
Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland C/Raxmaan Saylici oo xidhitaankii shirka golaha dhexe ee xisbul xaakimka dalka ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay sida uu u qabsoomay shirkaasi, waxaanu u mahad celiyay Hoggaanka iyo Guddoonka Golaha dhexe ee soo agaasimay shirkaas.
Isaga oo arimahaas ka hadlayana, waxa uu yidhi “Waxaan ugu horayn u mahad celinayaa ergadda Golaha dhexe ee ka kala yimid goboladda dalka oo aan ku hambalyeynayo siday uga soo qeyb-galeen shirweynaha sadexaad ee Golaha dhexe, waxa kaliya oo aan leeyahay haddii aynu nahay xisbiga KULMIYE waxa ILAAHAY mahaddii ah inaynu talladdii dalka hayno oo aynu noqono muunaddii dimuqraadiyadda. Waxaana aynu nahay xisbiga kaliya ee ugu nidaamka wanaagsan axsaabta siyaasadda”.
C/Raxmaan Saylici oo la hadlayay taageereyaashii KULMIYE, waxa uu yidhi “Waxaan leeyahay shacbiga iyo taageereyaashii KULMIYE xiligii aynu la wareegnay talladda dalka waxa laga joogaa sanad iyo dheeraad.
Waxaan leeyahay haddii aanu idinka yara fogaanay qoladayadii aad doorateen neceyb iyo ilowshiyo midna ma jiro ee masuuliyaddii dalka oo dhan ayaa dusha naga fuushay waxaana aanu jecel nahay inaad taas nala dareentaan, Marnaba idin maanu ilaawin dadkana waad nooga calaamadsan tihiin”.
Isaga oo Madaxwayne ku xigeenku hadalkiisa sii watana, waxa uu yidhi “Waxaanu ku mashquulsan nahay dantii guud iyo horumarintii dalka iyo sidii aynu wadankeena horumar dhinacyo badan leh u gaadhsiin lahayn, Waxaanu idiin balan qaadaynaa inaanu ka dhabayno himiladdii aad lahaydeen oo aad noo doorateen oo ay ka mid ahayd inaynu dhaqaalaha wax ka qabano, inaynu dimuqraadiyadda kobcino iyo inaynu ictiraafkii aynu gaadhno”.
Dhinaca kale Guddoomiyaha ku meelgaadhka ah ee Xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay gabo-gabaddii shirweynaha golaha dhexe ayaa u mahad celiyay ergadii Golaha dhexe, waxaanu tilmaamay inuu xisbigoodu qabyo-tirtay hawlihiisii gaar ahaan shuruucda iyo buuxinta xubnihii ka banaanaa Golaha dhexe iyo Hoggaanka xisbiga.
Waxaanu hadalkiisa ku bilaabay “Walaalayaal, shirkeenan maanta waan arkayaa inuu aad iyo aad u shaqeeyay oo aynu saacado badan fadhinay oo aynu daalan nahay, Marka horese waxaan u mahad naqayaa shir-gudoonkii shirkan inoo daadihinayay oo hawl-badan inoo soo qabtay iyo xubnaha Golaha dhexe.
Maanta KULMIYE wuxuu ka gudbay marxaladii labaad oo ah inuu hawlihiisa xeerarkiisa hagaajisto, inuu madaxdiisa kala bedelo. Walaalayaal waxa inoo balan ah inaynu daadkeena ugu adeegno sidii aynu ugu balan qaadnay”.
Muuse Biixi mar uu ka hadlayey marxaladda uu xiligan waajahayo xisbigiisu wuxuu yidhi “Waxaynu maanta taagan nahay doorashadii dawladaha Hoose oo ay u tartamayaan Xisbiyo iyo ururo.
Kulmiye wuxuu kaga duwan yahay xisbiyadda iyo ururadda tartamya isagu maanta wuxuu taagan yahay hawshii dadweynoow aad ii dirteen intaasna waan qabtay intaasina way uu hadhay. Xisbiga Kulmiye ma aha imika mid dadka malo-awaal iyo waxaas ayaan qaban doonaa dadka ugu balan qaadaya, Waxa taalla wixii uu qabtay iyo hawsha uu ku dhex jiro.
Sidaas darteed, waxa Hoggaanka xisbiga Kulmiye, xukuumadda iyo dhammaan taageereyaashiisa waxa la gudboon dedaal dheeraad ah oo aynu ugu hawl-galo sidii aynu u qancin lahayn taageereyaasheena. Inagoo muujinayna dedaal iyo hawl-karnimo sidii aynu horeba u balan qaadnay. Waxaan ku soo gabo-gabaynayaa Xisbiga KULMIYE ha guulaysto”.
"Waa in aan ka jawaabaa…waa in laga jawaabaa" Farriin Adag oo Cabdiraxman Cabdilqaadir uu Dadkiisa U Diray. Faallo: Xaaji Axmed Miisaan Iyo Suldaan Dhawal, oo Keligood Ka Qayb Galay Shirkii Kulmiye ee Hargeysa, Saylicina Bahdilay